May 2, 2019 - MM Live News
သိန်း၁၅ဝဝဝ ကံထူးရှင် ပေါ်ထွက်လာပါပြီ….
May 2, 2019 MM Live
သိန်း ၁၅ဝဝဝ ကံထူးရှင် ပေါ်ထွက်လာပါပြီ… ၃ကြိမ်မြောက်အတွက်ပုသိမ်မြို့၊တက်ဆိပ်ရပ်ကွက်က သိန်း၁၅၀၀၀ကံထူးရှင်ဟု ကြားသိရသည်။ Master Thet ထီပေါက်ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲ….. ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာသွားထုတ်ရပါမယ် …ဘာတွေထည့်သွားရမလည်းဆိုတော့…. 1. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ 2. မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ 3. ထီလက်မှတ် 4.ပတ်စပို့စ် ပုံ ၃ပုံ ( ၅သောင်းဆုဆိုရင်တော့ ၁ပုံဆိုရပါတယ်) အပေါ်ကအချက်အလက်များကိုယူသွားရပါမယ်..ရုံးချုပ်ရောက်ရင် အပေါက်ဝမှာ အဝင်အထွက်စစ်ဆေးတဲ့ အန်တီ(သို့)ဦးလေးကို ထီသွားထုတ်မလို့ ပြောပြီး နာမည်ရယ် မှတ်ပုံတင်ရယ်ရေး လက်မှတ်ထိုးရပါမယ် …. ပြီးရင် ၃လွှာကို ဓါတ်လှေကား (သို့) ရိုးရိုးလှေကားက တတ်သွားပါ….ဝင်ဝင်ချင်း ဓါတ်လှေကားဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထီဆုငွေများထုတ်ယူရန်ဆိုပြီး ရေးထားတယ် ….. အာ့မှာ […]
ကားဝယ်စီးဖို့ လှူခဲ့တဲ့ အလှူငွေ သိန်း(၁၅၀) ကျော်ကို ဆေးခန်းဆောက်ဖို့ ပြန်လှူခဲ့တဲ့ ဆရာတော်…….
ဒကာမတစ်ယောက်က ဆရာတော်ကို ကားဝယ်စီးဖို့ အလှူငွေ သိန်း ၁၅၀နဲ့ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ် ဒီအလှူငွေတွေကို ဆရာတော်က ဆေးခန်းဆောက်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာမှာ ပြန်လည်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်….. ဆရာတော်က ဒီအလှူငွေတွေကို ပင်းတယမီးရှင်ဆုရ ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာ သန်းမင်းထွဋ်ထံ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်….ဆရာတော်က ခုလိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်….. ‘ဒကာမကြီးတစ်ယောက်က ဘုန်းကြီးကို ငွေတွေလှူတယ်။ ကားဝယ်စီးဖို့တဲ့။ ဘုန်းကြီးက စဉ်းစားတယ်။ ငါ့မှာ ကားလိုလားလို့။ သွားချင်ရင် Taxi ငှားသွားလည်းရတယ်။ မိတ်ဆွေတွေဆီက ကားအကူအညီ တောင်းရင်ရတယ်။ ဒီငွေတွေ ငါ့အတွက် မသုံးဖို့ ၊ လိုတဲ့နေရာ လှူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒကာမကြီးကို ပြောတော့ ဒကာမကြီးက အရှင်ဘုရား ကြိုက်ရာသုံးပါလို့ ပြောရှာတယ်။ ဒါနဲ့ ဘုန်းကြီးလည်း ဘယ်နေရာ လှူရမလဲ ရှာနေတုန်း […]
ပဟေဠိဆန်စွာ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေတဲ့ မြမြ ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်…..
မြမြရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက် (သို့ ) အဖြေမရှိသေးတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ် မြမြဝိဥာဉ်ပူးပြီး မုဒိန်းကျင့် အသတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတခု ကျနော် ထဲဝင်လေ့လာစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာ တွေ့ရှိလေ့လာသုံးသပ်ချက်တွေ ဖော်ပြချင်တယ်။ ဒီပြသနာရဲ့ အဖြေအစ ၃ခုရှိတယ်….. ၁ ဝိဥာဉ်ပူးတာ။ ၂ လူပျောက်တာ ၃။ အလောင်း ၁။ ဝိဥာဉ်ပူးတာက ကျနော်တို့ သဘာဝလွန်ဖြစ်နေတော့ အတည်ယူလို့ မရဘူး။ ၃။ အလောင်းကလည်း ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုမြှပ်ထားလဲ မသိနိုင်အတွက် အချိန်တိုအတွင်း မပေါ်နိုင်ဘူး။ ၂ ဖြစ်တဲ့ လူပျောက်မှု ရှိမရှိဟာ ယုတ္တိကျတဲ့ ကိစ္စဖြစ်လို့ ကျနော်စုံစမ်းလေ့လာတယ်။ ပျောက်တဲ့ မိန်းခလေး ရှိ မရှိ။ ကျနော် ဝိဥာဉ်ပူးတာ မယုံသလို စက်ရုံဘက်ကို မယုံပါဘူး။ ထို့အတူ ရဲတွေအပူတပြင်းရှာဖွေနေတယ် […]
2019ခုနှစ် (5)လပိုင်းအတွက် (၇)ရက်သား သမီးများအတွက် တစ်လစာကံကြမ္မာ ဟောစာတမ်းကြီးလာပါပြီ …..
တနင်္ဂ​နွေသားသမီးများ ငွေကြေးကိစ္စများကို သတိထားဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလဖြစ်သည်။ဒီကာလဟာတနင်္ဂ​နွေသားသမီး​တွေအတွက်​ အ​ကောင်းအဆိုး​ရော​ထွေးနေတဲ့အချိန်​ပါ။ ဒါ​ပေမဲ့အ​ကောင်းဘက်​ကိုအ​လေးသာပါတယ်​။ ဒီကာလမှာ ​ဆွေမျိုးသားချင်း​တွေ မိသားစုဝင်​​တွေ​ကြောင့်​ စိတ်​ဆင်းရဲရမဲ့ကာလပါပဲ။ မိတ်​​ဆွေအ​ပေါင်းအသင်း အထက်​လူကြီး​တွေရဲ့ကူညီမစခြင်းကို​တော့ ရမဲ့ကာလပါ။တစိမ်းမိန်းမတစ်​​ယောက်​က အကူအညီ​ပေးမဲ့အချိန်​ပါ။ အများနဲ့စု​ပေါင်းလုပ်​ရ​သောအလုပ်​၊အတူတကွတတ်​ညီလက်​ညီလုပ်​ရ​သောကိစ္စရပ်​​ တွေမှာ ​အောင်​မြင်​မှုရပါလိမ့်​မယ်​။ အလုပ်​စီးပွား​ကောင်းလာပါပြီ။ အလုပ်​မှာရာထူးတိုးခြင်း၊အထက်​လူကြီးသ​ဘောကျခြင်းမျိုးကြုံရတတ်​သလို ကိုယ်​ပိုင်​လုပ်​ငန်းလုပ်​သူ​တွေလဲ အကျိုးဖြစ်​ထွန်းမဲ့အချိန်​ပါပဲ။ ကျန်းမာရေး အတွက်ကတော့စိတ်ပူစရာမလိုသေးတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ မိမိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရောဂါရှိရင်လဲ သမားတော်နဲ့ပြသအကြံဥာဏ် တောင်းလို့အလွန်ကောင်းတဲ့ ကာလပါ။အချစ်​​ရေးက​တော့ ​မျှော်​လင့်​ထားသလိုမဖြစ်​နိုင်​​သေးပါ။ အိမ်ထောင်ရေး မှာတော့ ကြားလူတွေကြောင့်စိတ်ဝမ်းကွဲရတတ်ပါတယ်။ ပညာ​ရေး အထူး​ကောင်း​နေချိန်​ပါပဲ။ မိမိကြိုးစားထားသမျှ တွေအရာထင်အောင်မြင်မဲ့နေ့ရက်တွေပါပဲ။ ယတြာ = မိမိမွေးနေ့အပတ်တိုင်း သက်သက်လွတ်စားပေးပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်း ဘုရားကျောင်းများတွင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပြီး ရေအိုးစဉ်များ လှူပေးပါ။ တနင်္လာသားသမီးများ စဉ်းစားချင့်​ချိန်​ပြီးမှအရာရာကိုလုပ်​သင့်​တဲ့ အချိန်​ပါပဲ။ ဘာကိစ္စကိုမဆို​ခေါင်း​အေး​အေးထားပြီး ဆုံးဖြတ်​ချက်​ချပါ။ အလုပ်​ထဲမှာ အလွန်​စိတ်​ညစ်​ရမဲ့ကိစ္စ​တွေကြုံလာရတတ်​ပါတယ်​။ စီးပွား​ရေးကံမ​ကောင်း​သေးပါဘူး။​ရွှေ​ငွေ လက်​ဝတ်​ရတနာ​တွေ ထွက်​တတ်​ပါတယ်​။ မိသားစုအတွင်း […]
#အမြန်လမ်းခရီးသွားသူများသိစေရန် share ပေးပါ.. အမြန်လမ်းခရီးသွားသူများအနေဖြင့် အမြန်လမ်းပေါ်တွင် ကားပျက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ညဘက်နားရန်အခက်ခဲများရှိခဲ့ပါက အနားယူနိုင်တဲ့ နေရာလေးကို လမ်းညွှန်ပေးပါရစေ…. အမြန်လမ်း ၁၁၅ မိုင် မီးသတ်စခန်းတွင် ခေတ္တအနားယူရန်အတွက် အိပ်ခန်း ရေချိုးခန်း အိမ်သာ ထမင်းစားခန်း စုံလင်စွာဖြင့် ခရီးသွားများ သက်တောင့်သက်သာအနားယူနိုင်ရန် အမြန်လမ်း ၁၁၅ မိုင် မီးသတ်ဌါနမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားတာတွေပါ၊ ကားပျက်၊ဘီးပေါက်တာ ဆီပြတ်တာတွေကအစ လိုအပ်တာ ကူညီပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ Jinme Myo Thaw unicode #အမွနျလမျးခရီးသှားသူမြားသိစရေနျ share ပေးပါ.. အမွနျလမျးခရီးသှားသူမြားအနဖွေငျ့ အမွနျလမျးပျေါတှငျ ကားပကျြလို့ပဲဖွဈဖွဈ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ညဘကျနားရနျအခကျခဲမြားရှိခဲ့ပါက အနားယူနိုငျတဲ့ နရောလေးကို လမျးညှနျပေးပါရစေ… အမွနျလမျး ၁၁၅ မိုငျ […]
အမြန်ရေယာဉ်ပေါ် Upper အခန်းထဲက လူမြင်ကွင်းမှာ မဖွယ်မရာပြုလုပ်နေပြီး…ပေါ်တင်စော်ကားလာနေကြပြီ…
ဘာသာခြားများက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပေါ်တင်စော်ကားလာနေကြပြီး ဘုရားသားတော်တွေကိုသိက္ခာကျ အများအမြင်လွဲအောင် ငွေကြေးရယူ လုပ်ဆောင်သော စုံတွဲဖမ်းဆီးရမိ ဖြစ်စဉ်မှာ….. ဧပြီလ ၂၇ ရက် မုံရွာ မင်းကင်း ပြေးဆွဲနေတဲ့ အမြန်ရေယာဉ်ပေါ်က Upper အခန်းထဲမှာ သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ အမျိုးသမီးတဦး လူမြင်ကွင်းမှာ မဖွယ်မရာပြုလုပ်နေပြီး…. အဲ့ဒီ သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ လူဟာ အရက်သေစာ သောက်စားထားတယ်ဆိုတာ တွေ့တဲ့အတွက် တာဝန်ရှိသူများထံတိုင်ကြားရာ တာဝန်ရှိသူများ သွားရောက်စစ်ဆေးမေးမြန်းရာ…. ဘုန်းကြီးအတုအယောင်အဖြစ် စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ပြီး ငွေ ၁၀ သိန်းယူကာ အများအမြင်တွင် သင်္ကန်းဝတ်ကာ ထိုသို့ပြုမှုနေထိုင်ရန် ခိုင်းစေကြောင်းပါ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့်တွက် ၂ယောက်လုံးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရှိရပါသည်…။ ဗုဒ္ဓဘာသာများ နားမျက်စိ ဖွင့်ထားကြပါ…..။ Crd-#သထုံ နယ်စားလေး unicode ဘာသာခွားမြားက ဗုဒ်ဓဘာသာကို ပျေါတငျစျောကားလာနကွေပွီး ဘုရားသားတျောတှကေိုသိက်ခာကြ […]
သူ့ကိုသတ်သူအား မြွေကိုယ်​တိုင်​ဝင်​ပူးပြီး သူအ​ရေခွံကိုသူ့တွင်းဝမှာထား​ပေးရန်​ပြော….
ကျောက်​ပန်း​တောင်းမြို့​အောင်​မင်္ဂရပ်​ကွက်​ ကြွယ်ဝ​တောင်​ဘုရားအနီး29-4-2019 ..မှ..30ရက်​​နေ့ဖြစ်​ရပ်​​လေးပါ။​ယခုပုံပါ လူငယ်​မှ ​မွေးကြီးအား သတ်​၍ အ​ရေခွံဆုပ်​ အပြီးအသတ်​ခံရ​သော ​မွေမကြီးမှ ဝင်​ပူး​နေသည်​မှာ ၂ရက်​ ရှိပါပြီ။ အသတ်​ခံရ​သော ​မွေမကြီးမှာ သူက​လေးများ ၎င်း တွင်းထဲတွင်​ရှိ​ကြောင်း က​လေး​မွေးပြီးတာ ၃ရက်​သာ ရှိ​သေး​ကြောင်း ဝင်​ပူးပြီး​ပြောသံကြားရ..။သူအ​ရေခွံကို သူ့တွင်းဝတွင်​ ထား​ပေးရန်​နှင့်​နို့​သောက်​ချင်​​ကြောင်း မကြာခန​ပြော၏။ လက်​​တွေ​ရောနှာ​ခေါင်း​တွေပါးစပ်​​တွေနဲ့ပါ တဖူးဖူးမှုတ်​၍ ဝင်​မလို​တွေဖြစ်​​နေလို့အနီးနားရှိသူ​တွေမှ​တောင်းပန်​ပီးလိုတာ​ပြောပါလို့​ပြောတဲ့အခနွားနို့​ပေးပါပဲ​တောင်း​နေပီးငါက​လေး​တွေရှိတယ်​လို့လဲ​ပြောပါတယ်​။ နောက်​ပီးဒီနားကသတ္တဝါ​တွေလဲမသတ်​နဲ့သတ်​ရင်​ကိုယ့်​အပြစ်​ကိုယ်​ခံလို့လဲ​ပြောပါတယ်….သူ့အ​ရေခွံဆုတ်​ပီး၃ရက်​အတွင်းလာထားပါရန်​…လဲမှာပီးတွင်းထဲ​မြွေတွန်​သံလိုတဖူးဖူးမှုတ်​ပီးမှခန္ဓာမြှပန်​ထွက်​သွားပါသည်​။ Kyaw Min Oo မြွေကိုသတ်​သူကို မြွေကိုယ်​တိုင်​ဝင်​ပူး၍ သတိ​ပေးသွား​သောဖြစ်​စဉ်​ ( ရုပ်သံ ) ည ၈ နာရီမှာ ​ကျောက်​ပန်း​တောင်းမြို့ကြွယ်​ဝ​တောင်​မှာ ​မြွေမှသုကိုသတ်​သူကိုယ်​တိုင်​ဝင်​ပူး၍ သတိ​ပေးသွား​သောဖြစ်​စဉ်​​လေးပါ…. ဖြစ်​စဉ်​အစက​တော့ရထားလမ်းနဲ့ကြွယ်​​တောင်​သွားရာလမ်းသပွတ်​ပင်​တွင်​​မြွေ​ပွေးတ​ကောင်​ကသူတွင်းထဲဝင်​မလို့အလုပ်​မှာ ကြွက်​ကိုလဲမြိုထား​တော့ တွင်းထဲမ​ရောက်​ပဲပြုတ်​ကျတဲ့အချိန်​… ကြွယ်​​တောင်​ရွာမှအလုပ်​ပြန်​သူ ၃ ဦးက ​တွေ့ရှိသဖြင့်​​မြွေ​မြွေဟု​အော်​ကြရာရထားလမ်းတဖက်​ခြမ်းတွင်​​နေထိုင်​​သောသူများကကြားရှိပီးချက်​ချင်းသတ်​၍ယူသွားကြပါသည်​….. ​နောက်​တနာရီ​လောက်​အကြာတွင်​သတ်​သူကိုယ်​တိုင်​နွားနို့​တောင်းလာသဖြင့်​သုအမျိုးသမီးမှမရှိဘူး​ပြောချိန်​ငါ့ကိုသိုက်​ပြန်​ပို့​ပေးငါ့​နေရာပြန်​ပို့​ပေးဆိုပီးဝင်​၍ပူးပီးချက်​ချင်းဆိုသလို​မြွေလိုတွားသွား၍သုတွင်းရှိရာ​ရောက်​လာပီး….. လက်​​တွေ​ရောနှာ​ခေါင်း​တွေပါးစပ်​​တွေနဲ့ပါ တဖူးဖူးမှုတ်​၍ ဝင်​မလို​တွေဖြစ်​​နေလို့အနီးနားရှိသူ​တွေမှ​တောင်းပန်​ပီးလိုတာ​ပြောပါလို့​ပြောတဲ့အခနွားနို့​ပေးပါပဲ​တောင်း​နေပီးငါက​လေး​တွေရှိတယ်​လို့လဲ​ပြောပါတယ်​။ နောက်​ပီးဒီနားကသတ္တဝါ​တွေလဲမသတ်​နဲ့သတ်​ရင်​ကိုယ့်​အပြစ်​ကိုာ်​ခံလို့လဲ​ပြောပါတာ်​ […]
ကျောက်ပန်းတောင်းမှာ အသတ်ခံရတဲ့ မြွှေက ဝင်ပူးပြီး သတ်သူများကို သတိပေးနေတဲ့ဖြစ်ရပ်…
မြွေကိုသတ်​သူကို မြွေကိုယ်​တိုင်​ဝင်​ပူး၍ သတိ​ပေးသွား​သောဖြစ်​စဉ်​ ( ရုပ်သံ ) ည ၈ နာရီမှာ ​ကျောက်​ပန်း​တောင်းမြို့ကြွယ်​ဝ​တောင်​မှာ ​မြွေမှသုကိုသတ်​သူကိုယ်​တိုင်​ဝင်​ပူး၍ သတိ​ပေးသွား​သောဖြစ်​စဉ်​​လေးပါ…. ဖြစ်​စဉ်​အစက​တော့ရထားလမ်းနဲ့ကြွယ်​​တောင်​သွားရာလမ်းသပွတ်​ပင်​တွင်​​မြွေ​ပွေးတ​ကောင်​ကသူတွင်းထဲဝင်​မလို့အလုပ်​မှာ ကြွက်​ကိုလဲမြိုထား​တော့ တွင်းထဲမ​ရောက်​ပဲပြုတ်​ကျတဲ့အချိန်​… ကြွယ်​​တောင်​ရွာမှအလုပ်​ပြန်​သူ ၃ ဦးက ​တွေ့ရှိသဖြင့်​​မြွေ​မြွေဟု​အော်​ကြရာရထားလမ်းတဖက်​ခြမ်းတွင်​​နေထိုင်​​သောသူများကကြားရှိပီးချက်​ချင်းသတ်​၍ယူသွားကြပါသည်​….. ​နောက်​တနာရီ​လောက်​အကြာတွင်​သတ်​သူကိုယ်​တိုင်​နွားနို့​တောင်းလာသဖြင့်​သုအမျိုးသမီးမှမရှိဘူး​ပြောချိန်​ငါ့ကိုသိုက်​ပြန်​ပို့​ပေးငါ့​နေရာပြန်​ပို့​ပေးဆိုပီးဝင်​၍ပူးပီးချက်​ချင်းဆိုသလို​မြွေလိုတွားသွား၍သုတွင်းရှိရာ​ရောက်​လာပီး….. လက်​​တွေ​ရောနှာ​ခေါင်း​တွေပါးစပ်​​တွေနဲ့ပါ တဖူးဖူးမှုတ်​၍ ဝင်​မလို​တွေဖြစ်​​နေလို့အနီးနားရှိသူ​တွေမှ​တောင်းပန်​ပီးလိုတာ​ပြောပါလို့​ပြောတဲ့အခနွားနို့​ပေးပါပဲ​တောင်း​နေပီးငါက​လေး​တွေရှိတယ်​လို့လဲ​ပြောပါတယ်​။ နောက်​ပီးဒီနားကသတ္တဝါ​တွေလဲမသတ်​နဲ့သတ်​ရင်​ကိုယ့်​အပြစ်​ကိုာ်​ခံလို့လဲ​ပြောပါတာ်​ သုအ​ရေခွံဆုတ်​ပီး၃ရက်​အတွင်းလာထားပါရန်​လဲမှာပီးတွင်းထဲ​မြွေတွန်​သံလိုတဖူးဖူးမှုတ်​ပီးမှခန္ဓာမြှပန်​ထွက်​သွားပါသည်​။ ဤအနီးနားတွင်ကြွယ်​ဝ​တောင်​၏ရာဇဝင်​ကိုကြားသိ​နေရ​သော်​လည်း မယုံတာလည်းမဟုတ်​ ယုံတာလည်းမဟုတ်​ယခုမူလက်​​တွေ့မြင်​လိုက်​ရ​လေပီ မယုံလို့မရတာကို လက်​​တွေ့ပြ​လေပီ ဝင်​ပူးတဲ့ vedio ​file ​လေးတင်​​ပေးလိုက်​ပါတ်​​နော်…..။ unicode မွှကေိုသတျ​သူကို မွှကေိုယျ​တိုငျ​ဝငျ​ပူး၍ သတိ​ပေးသှား​သောဖွဈ​စဉျ​ ( ရုပျသံ ) ည ၈ နာရီမှာ ​ကြောကျ​ပနျး​တောငျးမွို့ကွှယျ​ဝ​တောငျ​မှာ ​မွှမှေသုကိုသတျ​သူကိုယျ​တိုငျ​ဝငျ​ပူး၍ သတိ​ပေးသှား​သောဖွဈ​စဉျ​​လေးပါ…. ဖွဈ​စဉျ​အစက​တော့ရထားလမျးနဲ့ကွှယျ​​တောငျ​သှားရာလမျးသပှတျ​ပငျ​တှငျ​​မွှေ​ပှေးတ​ကောငျ​ကသူတှငျးထဲဝငျ​မလို့အလုပျ​မှာ ကွှကျ​ကိုလဲမွိုထား​တော့ တှငျးထဲမ​ရောကျ​ပဲပွုတျ​ကတြဲ့အခြိနျ​… ကွှယျ​​တောငျ​ရှာမှအလုပျ​ပွနျ​သူ ၃ ဦးက ​တှရှေိ့သဖွငျ့​​မွှေ​မွှဟေု​အျော​ကွရာရထားလမျးတဖကျ​ခွမျးတှငျ​​နထေိုငျ​​သောသူမြားကကွားရှိပီးခကျြ​ခငျြးသတျ​၍ယူသှားကွပါသညျ​….. ​နောကျ​တနာရီ​လောကျ​အကွာတှငျ​သတျ​သူကိုယျ​တိုငျ​နှားနို့​တောငျးလာသဖွငျ့​သုအမြိုးသမီးမှမရှိဘူး​ပွောခြိနျ​ငါ့ကိုသိုကျ​ပွနျ​ပို့​ပေးငါ့​နရောပွနျ​ပို့​ပေးဆိုပီးဝငျ​၍ပူးပီးခကျြ​ခငျြးဆိုသလို​မွှလေိုတှားသှား၍သုတှငျးရှိရာ​ရောကျ​လာပီး….. […]
ခွေးရူးကိုက်ကိုက် ခွေးကောင်းကိုက်ကိုက် သပြုသီးကို သတိရပါ
သပြုသီး_အသုံးဝင်ပုံများ ခွေးရူး (သို့)ခွေးကောင်းဘဲကိုက်ကိုက် သဗြုသီးအလုံးကိုထပ်ချမ်းခွဲပြီး အထဲက အရိအချွဲနဲ့ခွေးကိုက်သည့်အပေါက်ကိုလက်နဲ့ဖိကပ်ထားပေးပါ ၃မိနစ်လောက်ဆိုသူ့အလိုကပ်နေပါလိမ့်မည်… အဆိပ်ကုန်မှခွါလို့ရပါမည် သဗြုမြစ်ကိုလည်းသွေးတိုက်ပါ အသုံးလိုရင်တော့ သုံကြည့်လိုက်ပါ လက်တွေ့အသုံးပြုဘူး၍အကြံပေးတာပါ မသုံးလိုရင်မဝေဖန်ပါနဲ့ …. လူ၏ကံတရားဟာ ဘယ်ဖန်ဆင်းရှင်မမကယ်တင်နိုင်ပါ ….နွယ်မြက်သစ်ပင် ဂတိသစ္စာတည်သောအခါ နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်၏။ သပြုသီး….. “​​လေးဘက်​နာ လက်​​တွေ့သက်​သာတဲ့ရွှေထက်တန်ဖိုး ကြီးတဲ့…ဆေးနည်း​လေးများ”.သပြုသီးနဲ့ဆားကို အချိုးတူပြုတ်​ပြီး​အ​ငွေ့ခံ ချွေး​အောင်း​ပေးလိုက်​ပါ ။ တစ်​ကိုယ်​လုံးမှာရှိတဲ့ အပူအပုပ်​ ​ချွေး​တွေထွက်လာပြီးရင်​ ​ရေချိုး​ပေးပါ ။အစား​ရှောင်​စရာမလို​အောင်​ သက်​သာတယ်​ ။​ခြေစစ်​ လက်​စစ်​ ​တွေလည်းမကိုက်​​တော့ပါဘူး။ Aye Chan Pont Pont မေတ္တာဖြင့် စိုင်း မင်း သန့် …..မြန်မာ့ဆေးစွမ်းနှင့်အိမ်တွင်းဆေးမြီးတိုများ သပြုသီး ကိုဟင်းချက်စားလျှင်ဆေးဘက်ဝင်ပုံ ငါးခူနဲ့ သပြုသီးချက်စားပါ။ကျောက်ကပ်နှလုံးကောင်းလာပါမည်။ ငါးရံ့ ကင်ပြီး သပြုသီးကိုဟင်းချို ချက်စားပါ။ဆီးချိုသက်သာပျောက်ကင်ပါသည်။ သပြုတ်သီးကိုပြုတ်ပြီး ငပိရည်နဲ […]
၇ရက်သားသမီးများအတွက် 02.5.2019 မှ 08.5.2019 အထိ တစ်ပတ်စာ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း….
02.5.2019 မှ 08.5.2019 အထိ တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်းစိတ်ပျော်စရာတွေများနေတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ ခရီးသွားရတာ၊ပျော်ပွဲစား ထွက်ရတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း တတ်ညီလက်ညီနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်သွားနိုင်မဲ့ကာ လပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်များချစ်သူရဲ့ surprise လုပ်တာမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ ဒီကာလမှာ ဒေါင်ဒေါင်မြည်ကောင်းနေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ မိမိစိတ်ဝင်စားတဲ့၊မိမိဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေကို ဦးစားပေးလုပ် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ငွေရွှင်ပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ဝင်ငွေလဲကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ အကူအညီများစွာရလာနိုင်ပါတယ်။ ပြောင်းရွေ့လို့မရသောဥယျာဉ်၊ခြံ၊မြေ၊လယ်များ ၀ယ်ယူလို့ကောင်းတဲ့ နေ့ရက် တွေ ပါပဲ။ စန်းအား ကောင်းနေတဲ့နေ့ရက်တွေပါပဲ။ ချစ်သူရည်စားမရှိသူများ ချစ်သူရည်းစားအလွန်ပဲရ လွယ်နေ တတ်ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များကတော့ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေရဲ့နည်းပေးလမ်းပြ လုပ်ကိုင်မှုကြောင့်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အိမ်ထောင်ဘက်ကျန်းမာရေးအတွက်အနည်း ငယ်ပူပန်နေရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကံကတော့ အလွန်ကောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ အကျိုးပေးဂဏန်း 9/2/6 အထူးဟော စိတ်ချမ်းသာမဲ့ကာလပါ။ ယတြာ လာဘ်ဦးလက်ဖျားငွေကို […]